टेस्ट कूपन र छुटको फाइदाहरू Martech Zone
टेस्टिंग कूपन र छुटका फाइदाहरू
आइतवार, नोभेम्बर 29, 2015 सोमबार, नोभेम्बर 30, 2015 Douglas Karr
के तपाइँ नयाँ लीडहरू प्राप्त गर्न प्रिमियम भुक्तान गर्नुहुन्छ, वा तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न छुट प्रदान गर्नुहुन्छ? केही कम्पनीहरूले कूपन र छुट छुनेछैनन् किनकि उनीहरू आफ्नो ब्राण्डको अवमूल्यन गर्न डराउँछन्। अन्य कम्पनीहरु तिनीहरू मा निर्भर छन्, खतरनाक आफ्नो नाफा कम गर्न। यिनीहरू काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा श little्का छैन। Mar%% डिजिटल मार्केटरहरूले भने छूट र बन्डल नयाँ ग्राहकहरु प्राप्त गर्न को लागी प्रभावकारी छन्।
छूट छोटो अवधि को लाभ ड्राइभि at मा असाधारण छन् जबकि, तिनीहरूले तपाइँको तल्लो रेखा मा विनाश wreak गर्न सक्छन्, र सबै ग्राहकहरु लाई पूर्ण मूल्यमा किन्न कहिल्यै प्रशिक्षण। यसको मतलब ब्रान्डले केही पनि छुट नदिनु हुँदैन - परिष्कृत मार्केटर्स अब रणनीतिक हिसाबले छुट छुट विस्तारमा केन्द्रित छन्। उनीहरूलाई वन अफ रूपान्तरण मेसिनको रूपमा व्यवहार गर्ने। जेसन ग्रुनबर्ग, सेलथ्रु
कुपनहरू र छुटहरू तैनाथ गर्ने कुञ्जीले तिनीहरूलाई परीक्षण गर्दैछ। Mar 53% डिजिटल मार्केटरहरू उन्नत A / B वा मल्टिभेरिएट परीक्षण गर्दछन्। रूपान्तरण दरहरू, प्रयोग गरिएको च्यानलहरू, खरीद आवृत्ति, औसत अर्डर मान र ग्राहकहरूको जीवनकालिन मूल्य हेर्नुहोस् जुन कुपनहरू र छुटहरूको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको थियो।
हामीले सबै कुरा साझा गरेका छौं खुद्रा विक्रेताहरूलाई कुपनको बारेमा जान्नु आवश्यक छ र अघिल्लो इन्फोग्राफिकमा छुट रणनीतिहरू। जे होस्, यो सबै मूल्य, बन्डलि,, र छुटको फ्रिक्वेन्सीमा तल आउँदछ जब सम्म तपाईंले सही संयोजन फेला पार्नुहुन्न जुन ग्राहकलाई आकर्षण गर्दछ र बैंकलाई तोडे बिना ग्राहकलाई कायम गर्दछ!
टैग: औसत अर्डर मानच्यानलहरुकुपन रणनीतिहरूकुपनछुट रणनीतिहरुडिजिटल युगमा छुटआजीवन ग्राहक मूल्यजीवनभर मूल्यsailthruपरीक्षण
तपाईंको सामग्री मार्केटिंगको आरओआई बढाउने ११ तरिकाहरू